2018 မော်ကွန်း - Brick Fanatics
12 / 10 / 2018 12 / 10 / 2018 Sebastian 1879 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, တင်ပြ, ပွပှဲ, ဂရိတ်အနောက်တိုင်းအုတ်ပြပွဲ, Lego ပြသမှု, Lego ပြပွဲ, ရနှေးငှေ့, Swindon
Great Western Brick Show သည် Swindon ရှိ Steam ပြတိုက်တွင်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနှင့် Brick Fanatics အဲဒီမှာရှိခဲ့သည်
Lego Ideas 21311 Voltron ကိုတရားဝင်သတ်မှတ်
28 / 06 / 2018 05 / 09 / 2018 ဂရေဟမ် 1675 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, ၂၁၃၁၁ Voltron, Ideas, Lego, Lego Ideas, Voltron, Voltron: စကြဝofာ၏ Defender
အဆိုပါ Lego Ideas အဖွဲ့သည်တရားဝင်ရုပ်ပုံများနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်၏အဓိကထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ကို ၂၁၃၁၁ ကိုဝေမျှခဲ့သည်
အသစ် - မဖြစ်မနေ LEGO အစုံဆယ်ခု
04 / 06 / 2018 05 / 06 / 2018 ဂရေဟမ် 1316 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, Lego, နွေရာသီ
ပရိသတ်များအလေးအနက်ထားစဉ်းစားသင့်သော 10, သောဇွန်လ LEGO အစုံသစ်၏? Lego
18 / 05 / 2018 ဂရေဟမ် 1701 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 76110 Batman: Talons များ၏တိုက်ခိုက်မှု, 76111 Batman: ညီအစ်ကိုမျက်လုံး Takedown, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, Lego, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, ထုတ်ကုန်သစ်များ
18 / 05 / 2018 ဂရေဟမ် 2368 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 75203 Hoth ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း, 75213 ထွန်းပြက္ခဒိန်, 75221 မှာ Imperial ကမ်းတက် Craft, Lego, Lego Star Wars, ထုတ်ကုန်သစ်များ, Star Wars
17 / 05 / 2018 17 / 05 / 2018 ဂရေဟမ် 1655 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 5216 Snoke ရဲ့ရာဇပလ္လင်, 75214 Anakin ရဲ့ Jedi Starfighter, 75218 X- တောင်ပံ Starfighter, ၇၅၂၂၀ Sandcrawler, Lego, Lego Star Wars, ထုတ်ကုန်သစ်များ, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi
17 / 05 / 2018 25 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 1133 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 76112 အက်ပ်ထိန်းချုပ်ထားသော Batmobile, Batman, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, Lego, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, ထုတ်ကုန်သစ်များ
17 / 05 / 2018 25 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 2778 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 75953 Whomping မိုးမခ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်, 75956 Quidditch ပွဲစဉ်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, ထုတ်ကုန်သစ်များ, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
ပရိသတ်များသည်မနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော LEGO Harry Potter အစုံလိုက်ပုံများကို ထပ်မံ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ မနေ့က
17 / 05 / 2018 17 / 05 / 2018 ဂရေဟမ် 1710 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 41456 Unikingdom Fairground ပျော်စရာ, Lego, Lego Unikitty!, ထုတ်ကုန်သစ်များ, မင်္ဂလာပါ
အသစ် LEGO Unikitty မှနောက်ထပ် set! ဆောင်ပုဒ်, 41456 Unikingdom Fairground ပျော်စရာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခင်ကအပြင်